« Mifohaza ianao »
(Matio 2 :13)
Ry havana malala, vao avy nankalaza ny Tompo tamin’ny Krismasy isika, andro nahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy. Koa raha tonga ny Mpamonjy dia mitaky inona aminao izany ? Momba izany indrindra ny hafatra ho antsika anio, araka ny teny nataon’ny anjely tamin’i Josefa hoe : « mifohaza ianao ! »
I MIFOHAZA IANAO, HENOY NY TENIN’NY TOMPO!
Izany no hafatra voalohany ho anao. Natory i Josefa teto ary ny anjely, izay irak’Andriamanitra nitondra ny teniny no nanaitra azy.
Ny tenin’Andriamanitra tokoa mantsy ,ry havana, no manokatra ny saintsika hahalala ny sitrapon’Andrimanitra tokony hataontsika. Ary raha sahiran-tsaina isika ny amin’izay hatao, moa tsy marina ve fa fanilon’ny tongontsika sy fahazavana ny lalantsika ny Tenin’Andriamanitra, araka ny Salamo 119:105? Anio dia mandre Tenin’Andriamanitra indray ianao amin’ny alalan’ny Soratra Masina novakintsika sy amin’ny alalan’izao toriteny izao. Mifohaza ianao, henoy izany Tenin’Andriamintra izany, ry havana! Aza manaiky ho renoka ao amin’ny torimason’ny fahazaranao, na ny torimason’ny tsy firaharahana ny antson’ny Tompo, na ny torimason’ny fangatahana andro lava. Fa mifohaza ianao, henoy ny Tenin’ny Tompo!
II MIFOHAZA IANAO, ANDOSIRO NY LOZA MITATAO!
I Josefa , ry havana, teto dia tsy nahalala akory fa misy loza mitatao ange eo amin’izy mianakavy kely. Ny Tompo no nampahafantatra azy izany ho famonjena azy sy ny zaza.
Toy izany koa isika indraindray: tsy mahalala akory ny loza mitatao eo amintsika na ny ankohonantsika. Saingy fohazin’Andriamanitra isika anio mba hahita fa misy tokoa ny loza mitatao amintsika. Fa moa tsy loza va ny tsy fahalalana ny Soratra Masina izay andraisantsika ny Tenin’Andriamanitra nambara teo fa tokony hohenointsika? Fa hoy Jesoa: “Tsy izao tsy fahafantaranareo ny Soratra Masina sy ny herin’Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo?” (Marka 12:24). Ary raha lazain’i Paoly fa : “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.”( II Tiimoty 3:16-17), moa tsy ho loza ho antsika ny fahamaroan’ny olona tsy mahay ny Soratra Masina? Fa manjary olona bado ara-panahy izy ireny satria tsy mahazo “fampianarana”. Tonga olona be fisalasalana izy ireny satria tsy nahazo “fandresen-dahatra”. Tonga olona diso lalana izy ireny satria tsy nahazo “fanitsiana izay diso”. Tonga olona tsy mahalala ny marina izy ireny satria tsy nahazo ny “fitaizana amin’ny fahamarinana”. Vokany, tonga olona tsy “vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra;” izy ireny ka dia mpitazana sy mpitan-damba fotsiny ato amin’ny Fiangonana, fa tsy sahy mandray andraikitra, tsy vonona hijoro!
Ry havana malala, mety ho ianao izany olona izany! Koa antsoina ianao anio: mifohaza, andosiro ny loza mitatao fa misy te hamono ny Tenin’Andriamanitra ao aminao, tahaka ny nitadiavan’I Heroda hamono an’I Jesoa, ilay Teny tonga nofo!
III MIFOHAZA IANAO, MANAPAHA HEVITRA ANIO
Nasain’ny anjely nifoha i Josefa, hifoha hanapa-kevitra handray andraikitra hitondra an’i Maria sy i Jesoa zaza handositra ho any Egypta. ZavAtra sarotra izany nangatahina hataony izany: ny andro alina, ny ho entina zazakely, ny lalana haleha lavitra. Saingy nifoha I Josefa dia nandeha. Sady voavonjy izy , no voavonjy koa I Maria sy i Jesoa zaza!
Toy izany mihitsy no andrasan’ny Tompo aminao anio, ry havana. Alahadin’ny fiantsoana anio ary antsoina manokana ianao anio hamaly ny antson’ny Tompo. Manana SEkoly FAnofanana LAïka isika FJKM, na ny SEFALA. Sekoly andalinana ny Tenin’Andriamanitra sy fiofanana ho lasa Mpiandry, na Mpitoriteny na Katetista izany. Ianao Mpandray ny Fanasan’ny Tompo io no antsoina hiditra amin’izany. Koa mitodika aminao ny Tompo anio. Mifohaza ianao, manapaha hevitra toa an’I Josefa. Aza manao hoe : sarotra izany, fa tsy sarotra noho izay notakiana tamin’I Josefa akory izany! Manapaha hevitra fa sady ho tombotsoa ho anao izany, no ho voninahitr’I Jesoa sy fampandrosoana ny Fiangonana! Iza amintsika ireto re no hanapa-kevitra hiditra amin’ny SEFALA anio e? mifohaza ianao, manapaha hevitra ry havana.
Izany ary ry havana ny hafatra tian’ny Tompo ho nomena ho antsika anio, antony nitondrany antsika teto androany. Mifohaza ianao, henoy ny Tenin’ny Tompo! Mifohaza ianao, andosiro ny loza mitatao! Mifohaza ianao, manapaha hevitra anio! Izay manan-tsofina hoenti-mihaino, aoka izy hihaino! Ary ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.